पाल्पामा गाेली चल्याे, एककाे मृत्यु, घटनावारे के भन्छ प्रहरी ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more पाल्पामा गाेली चल्याे, एककाे मृत्यु, घटनावारे के भन्छ प्रहरी ?
पाल्पामा गाेली चल्याे, एककाे मृत्यु, घटनावारे के भन्छ प्रहरी ?
पुस १८ गते, २०७४ - १०:५३
काठमाडाै । गाेली लागेर पाल्पामा एक जनाकाे मृत्यु भएकाे छ । तिनाउ गाँउपालिका ६ मस्यामकाे छत्तिवन जंगलमा ३६ वर्षका बलबहादुर लम्तरीले बाँदरलार्इ हानेकाे गाेली लागेर छिमेकी धनबहादुर थापाकाे ज्यान गएकाे जिप्रका पाल्पाले जनाएकाे छ ।
‘भरुवा बन्दुककाे गाेली झुकिकएर लागेको भन्ने छ’, प्रहरी निरीक्षक चन्द्र बहादुर थापा मगरले भने । गोली लागेपछि घटना स्थलमै उनको ज्यान गएको र गोली हान्ने बलबहादुरलाई बन्दुकसहित प्रहरीले पक्राउ गरि अनुसन्धान थालेको छ । पीडित पक्ष आक्रोशित भएका छन् ।
पुस १८ गते, २०७४ - १०:५३ मा प्रकाशित